यी १० सांसदले गर्नेभए ओलीलाई बाईबाई ! – GALAXY
काठमाडौं ।एमालेलाई १० बुँदे सहमति अनुसार ०७५ जेठ २मा फर्काउने सहमतिबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ब्याक भएका छन् । सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने भनिए पनि ओलीले त्यसमा कुनै चासो नदेखाएपछि नेताहरू चिन्तित बनेका छन् ।
१० . कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने । https://compaqnews.com/ बाट साभार गरीएको हो ।